Africa | Mustaqbal Radio
Xulka kubadda cagta 17-jirada Dalkeena Soomaaliya ayaa Galabta Guul ka gaaray Dhiggooda Kenya oo ay wada ciyaareen Kulankii ugu dambeeyay ee Groub-ka A. Xulkeena Somalia ayaa 1-0 kaga taqalusay Kenya, Ciyaarta ayaana Muhiim u aheyd Soomaaliya maadaama ay Xaqiijinayeen u gudubka Afar dhamaadka Ciyaaraha Koobka Afrika ee Ciyaartoyda da’dooda ka yar tahay 17-jirada (CECAFA U17). Waxaana Goolka Guusha Soomaaliya u ...
Ciyaartoyda Xulkeena Soomaaliya oo hal lug la galay wareega afar dhamaadka tartanka 17 jirada ee CECAFA
Xulka qaranka dalkeena Soomaaliya gaar ahaan ciyaartooyda da’doodu ka hoosayso 17-ka sanno ayaa hal dhibic ka helay Burundi oo ah marti galiyaasha tartanka Cecefa under-17 kaddib markii ay wada galeen bar baro 0-0. Kullanka ayaa ka dhicay garoonka Ngozi ee ku yaala magaalada Bujumbura oo ah caasimadda Brundi. Xulkeena ayee leh afar dhibcood, waxaana hal lug ay lasii galeen Sami ...
Isku aadka koobka Kubadda Cagyaraha Afrika oo lasoo saaray, Soomaaliya yey ku aaday?
Xiriirka Kubad Cagyaraha Qaaradda Afrika ayaa soo saaray isku aadka tartanka kubadda cagyaraha ee Qaaradda Afrika,waxaana laga sameeyay labo Group. Isku aadka waxaa uu ka dhacay Dalka Liibiya Magaaladiisa Tripoli oo tartankan loo xushay in ay marti geliso,waxaana uu dhacayaa Bisha soo socota ee May.